အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်က ပြည်သူ့ကာ… – PVTV Myanmar
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်က ပြည်သူ့ကာ…
· 8 months ago ·24 Comments
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်က ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်၏ အလံတော်၊ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်၏သစ္စာဓိဌာန် (၄) ချက်၊ ရည်ရွယ်ချက်၊ အဓိကတာဝန်၊ လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတန်ဖိုးထားမှု၊ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ယဉ်ကျေးမှု၊ Change of Command စသည့် PDF နှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များထုတ်ပြန်။
Like – 16K Share – 2621
Thomas Ko says:
2021-05-23 at 10:56 PM
Military value and culture ကိုအသေးစိတ်လေးရှင်းပြပါအုံးဗျ
Harry Thu says:
2021-05-23 at 11:09 PM
“Chain of Command” pr kwar. Br lal Change of Command
အခုကယားကိုအသေဖိနေပြီး ခင်ဗျားတို့တွေလဲ တိုက်စစ်မျက်နှာဖွင့်ပါတော့ဟ တနိုင်ငံလုံး စစ်မျက်နှာဖွင့်မယ်ဆို မအလတွေ မခံနိုင်ပါဘူး
Zaw Nainglin says:
တပ်စု…….၃ စိတ်…..၃၀ ယောက်
တပ်ခွဲ…….၃ စု………၉၀ ယောက်
2021-05-23 at 11:41 PM
ပြည်သူ့ကာကွယ်​ရေးတပ်မ​တော်- People Defence Force (PDF)တိုက်ပွဲတိုင်း​အောင်နိုင်ပါ​စေ…..
မြန်မာပြည်အား အကြမ်းဖက် စစ်အာဏာရူးလက်မှ အမြန်ဆုံး ကယ်တင်နိုင်ပါ​စေ..
Htet Wai Yan Phyo says:
2021-05-24 at 12:08 AM
အရေးတော်ပုံ အောင် ရမည်
2021-05-24 at 1:43 AM
Htet MyatAung says:
2021-05-24 at 3:05 AM
တော်တော်လေးကို အသေးစိတ်ရှင်းပြလိုက်ကြတာပဲ 😁😁
Tin Zar Lwin says:
2021-05-24 at 3:40 AM
Hla Htay says:
2021-05-24 at 4:13 AM
တော်လိုက်တဲ့ တွက်ချက် တယောက်ကတလွဲတွေတွက်ပြနေတယ် ဟိုတယောက်က ဟုတ်ဟုတ်နဲ့ထောက်ခံနေတယ် ( တပ်စိတ် ၁ စိတ်မှာ ၁၀ ယောက် တပ်စုတစုမှာ ၃၀ ယောက် တပ်ခွဲမှာ ၉၀ ယောက် တပ်ရင်းတရင်းမှာ ၃၆၀ ကျော်ရှိရမယ်လေ
DrZaw Min says:
2021-05-24 at 6:34 AM
Chain of command not change of command for goodness sake!
U Phoe Marn says:
2021-05-24 at 8:41 AM
တပ္ရင္း ၁ရင္း တပ္ခြဲ ၄ခြဲ ၁ခြဲ ကို တပ္စု ၃ စုဖြဲ႕ထားေတာ့ ၉၀×၄= တရင္းကို ၃၆၀ ေက်ာ္ ရွိပါတယ္ တစ္ရာေက်ာ္နဲ႕တြက္ေျပာတာ မွားေနပါတယ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေျပာဆိုေပးပါ ခင္ဗ်ာ မသိေသးသူေတြ အမွတ္မွားမွာစိုးလို႕ပါ
2021-05-24 at 9:02 AM
HLa Zaw says:
2021-05-24 at 10:04 AM
အေရးေတာ္ပုံေအာင္ရမည္ မင္းေအာင္လိူင္စစ္ေသြးႂကြ ေတာင္းၾကမ္းသူ မၾကာမွီက်ဆုံးရမယ္
Arakan King says:
2021-05-24 at 10:38 AM
စုျကည္ေသမွ ေအာင္ျမင္မယ္ ယုံလားေတာ့ မသိဘူး
2021-05-24 at 2:15 PM
Yan Naing Htun says:
2021-05-24 at 3:06 PM
တွက်ပြတာ မှားနေပါတယ်၊ အမြန်ဆုံးပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးစေလိုပါတယ်၊ စာရွက်ပေါ်မှာ ရုပ်ပုံဇယားကွက်များကို အရောင်ခွဲပြီး ဖော်ပြပေးရင် အလွယ်တကူ လူတိုင်းနားလည်နိုင်မည်ဟု အကြံပေးလိုပါတယ် ခင်ဗျား..
Aung Win Thu says:
2021-05-24 at 6:58 PM
အေရးေတာ္ပံု ေအာင္ကို ေအာင္ရမည္
Maung Bluff Htun says:
အခု ျပည္​သူ႔ ကာကြယ္​​ေရး အဖဲြ႕​ေတြက တိုက္​​ေနတာ​ေတာင္​ မအလ ​ေတြ က မခံနိုင္​ဘူး ။ ဘယ္​ ​ေျပးရမလဲ မသိျဖစ္​​ေနၾကတယ္​ ။ ျပည္​သူ႔ ကာကြယ္​​ေရး တပ္​မ​ေတာ္​က​သာ စစ္​မ်က္​နွာ ဖြင္​့လိုက္​ရင္​ စစ္​​ေခြး​ေတြ ​ေျပးလမ္​း​ေပ်ာက္​ၿပီ
Marina Wallace says:
2021-05-25 at 7:40 AM
ကြိုဆိုပါတယ် PDF အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်
Myat Tin says:
2021-05-25 at 11:11 AM
ယုံကြည်မှု အပြည့်နဲ့ ယုံကြည်ပါတယ်
2021-05-25 at 3:34 PM
Someone interviewed the CDF spokesman and sadly their relationship with the NUG unsurprisingly is one of expectant and watchful mistrust inasimilar situation to the EAOs.
They have received no support worth writing home about, no proper liaison, only imposition. They started armed resistance early on their own, they’re not fighting for the NLD, and they won’t rename themselves PDF or be subsumed by it.
2021-05-30 at 8:06 PM
2021-08-22 at 3:03 AM
-အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနှင့် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကို ဖွဲ့စည်းထားခြင်းမရှိဆ…